शीर्ष नेताहरुले कहाँ कहाँबाट गरे मतदान ? | We Nepali
शीर्ष नेताहरुले कहाँ कहाँबाट गरे मतदान ?
वीनेपाली | २०७९ वैशाख ३० गते ९:०१
पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र डा बाबुराम भट्टराई, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाको रुवाखोलास्थित असिग्राम माध्यामिक विद्यालयस्थित मतदान केन्द्र (ख) बाट आज बिहान मतदान गर्नुभएको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भरतपुर महानगरपालिका–१४ स्थित नेपाल पुलिस स्कुल शान्तिपुरबाट मतदान गर्नुभएको छ ।
यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका-२ बालकोटमा रहेको महेन्द्र शान्ति माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्र ‘क’ बाट मतदान गर्नुभएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले रौतहटको गौर नगरपालिका–१ स्थित रामजानकी कन्या आधारभूत विद्यालय ‘क’ केन्द्रबाट मतदान गर्नुभयो ।
यस्तै, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गृहजिल्ला इलामको सूर्योदय नगरपालिका–९ करफोकस्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको छ ।
गणतन्त्र नेपालका पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले पनि मतदान गर्नुभएको छ । उहाँले धनुषाको लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिकास्थित बिपी कोइराला माध्यमिक विद्यालय सपही मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गर्नुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचनमा गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–१ स्थित अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालय केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विराटनगर महानगरपालिका–१४ स्थित विज्ञान सङ्काय स्नातकोत्तर क्याम्पस मतदान केन्द्रमा आज मतदान गर्नुभयो ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यद्वय डा शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालाले विराटनगर–७ स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय केन्द्रमा मतदान गर्नुभएको छ । यस्तै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले विराटनगर–१० स्थित भानु आधारभूत विद्यालयमा मतदान गर्नु भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले गृहजिल्ला रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका–१ बामरुकस्थित तारा माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नुभएको हो ।
त्यसैगरी पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले मतदान गर्नुभएको छ ।
पुनद्वयले रोल्पा नगरपालिका–७ माडिचौरस्थित बालउदय माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नुभएको हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले भक्तपुर नगरपालिका–५स्थित विद्यार्थी निकेतन माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत उहाँले सो केन्द्रबाट मताअधिकार प्रयोग गर्नुभएको हो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकबाट मतदान गर्नुभएको छ ।
उहाँले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–४ कुविण्डेस्थित सेतीदेवी पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको पशुपति केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको छ ।
उहाँले मोदी गाउँपालिका वडा नं ७ राम्जाको पशुपति मावि ‘क’ केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न अध्यक्ष तिमिल्सिना दुई दिनअघि नै आफ्नो गाउँ पुग्नुभएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–२ स्थित सत्यवती मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भक्तपुरको मध्यपुरथिमि–१ लोकन्थलीस्थित उपस्वास्थ्यचौकी मतदानस्थलबाट मतदान गर्नुभएको छ ।
उहाँले बिहान ७ बजे उक्त मतदानस्थलको ख केन्द्रमा मतदान गर्नुभएको हो । सो अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले पाँच वर्षपछि आफ्नो ठाउँको प्रतिनिधि चयन गर्न पाउँदा गर्व लागेको बताउनुभयो । उहाँले आम मतदातालाई उत्साहपूर्वक मतदानमा भाग लिन आह्वान गर्नुभयो । मतदान गर्नुअघि उहाँले मतदानस्थलको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।